Ajaanib Shabaab ah oo lagu dilay Sh.Hoose |
Ajaanib Shabaab ah oo lagu dilay Sh.Hoose
Muqdisho-Warbaahinta ku hadasha Afka ciidamada qalabka sida ee dowlada Soomaaliya ayaa baahisay in howlgal ay ciidamada Militariga soomaaliya ka sameeyeen Gobalka Shabeelaha Hoose ay ku dileen Ajaanib ka ka bar-bar dagaalamaysa Al-Shabaab.
Howlgalka ayaa waxaa ay saraakiisha ku sheegeen degaanada Baladul Amiin iyo Hanti wadaag oo ka wada tirsan G/Shabellada Hoose, iyagoona sheegay in ay bartilmaameedsadeen saldhigyo Al-Shabaab ay ku lahaayeen Gobalkaasi.
Sarkaal ka tirsan Militariga Soomaaliya oo soo xiganaysa ayaa Idaacaddda u sheegay in ay howlgalka ku dileen Xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Ku dhawaad 85 dagaalame iyo saraakiil isugu jira Soomaali iyo Ajaanib ayaa lagu dilay weerarka Howlgalka Sida ay sheegeen Militariga Soomaaliya.
Xubnaha ajaanibta ee lagu dilay weerarka Howlgalka ayaa waxaa Magacyadooda lagu kala sheegay Abuu Xamsa Bin Shaam kasoo jeeda dalka Masar kaasi oo Nabadiidka u qaabilsanaa Tababarada dagaalamayaasha, Aweys Abu Xamza Almifsali oo heesta dhalashada dalka Tanzania , Abuu Bilaal Zubeyr ayaa heesta Dhalashada Monotariya ayaa Hore u ahaa ku xigeenka Ibraahim Afgaan, Aadan Xaash Abuu musiyaan kana soo jeeda dalka Suuriya iyo Feysal Bin hayaan kasoo jeeda dalka Yaman.
Militariga Soomaaliya oo kaashanaya mareykanka ayaa Kordhiyay weeerarada ay la beegsanayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan qeybo ka mid ah Gobalada dalka.